Ny MacBook Pros 16-inch manaraka dia hita tao anaty tahiry fitantanana Shinoa | Avy amin'ny mac aho
Tsy vao sambany io Maheno sy mamaky tsaho momba ny mety fisian'ny maodely MacBook Pro 16-inch vaovao isika. Miaraka amin'ny fisehoana mini-LED ary fanatsarana ny chip M1. Toa manakaiky ny lasa zava-misy isika satria hoy i MacRumors nahita ny MacBook Pro ho avy ao anaty tahiry fitantanana Shinoa.
Ny kahie dia antenaina hitondra endrika ambony sy ambany kokoa ary seranan-tsambo maro hafa, ao anatin'izany ny fiverenan'ny seranana HDMI, slot amin'ny karatra SD, ary tadin'ny herinaratra manetazy. Ny tsaho ihany koa dia manome soso-kevitra fa hisotro ronono ny Touch Bar noho ny fanalahidy Fn ara-batana. Ireto Mac 16 Pro Mac 14 vaovao ireto dia hita tao anaty tahiry data sinoa. Ny lisitra, naseho tamin'ny 2527 aprily avy amin'ny mpivarotra Apple Sunwoda Electronic, dia ho an'ny bateria miaraka amina marika mitovy amin'ny Apple A8,693 miaraka amin'ny naoty 11.45 mAh / XNUMXV. Izy io dia mitovy amin'ny bateria MacBook Pro 16-inch amin'izao fotoana izao, izay naoty 8,790 mAh / 11.36V, raha ny filazan'ny iFixit.
Raha marina ny fampisehoana, ny MacBook Pro 16-metatra ho avy dia kely kokoa ny fahaizan'ny bateria noho ny maodely efa misy, mety ho noho ny endrik'ilay kahie. Na izany aza, ny fiatraikany mety hitranga amin'ny androm-batana dia mety hamafin'ny fiovan'ny MacBook Pro 16-inch avy amin'ny processeur Intel mankany amin'ny Apple Silicon mahomby kokoa. Raha ny tena izy, ny fiainana bateria dia mety hiafara lava kokoa noho ny ankehitriny.
Toa eo an-tampon'ny fahitana ilay solosaina finday vaovao Apple isika. Dimy andro manomboka ny fiandohan'ny WWDC. Ho hitantsika raha tsy manana ny fampisehoana an'io 16 ″ MacBook Pro vaovao io 7 jona io isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » tsaho » Ny MacBook Pros 16-inch manaraka dia hita tao anaty tahiry fitantanana Shinoa